अष्टलक्ष्मी माधव नेपालसँगको सल्लाहमा मुख्यमन्त्री बन्न जानु भएको होः युवराज ज्ञवाली « Rara Pati
अष्टलक्ष्मी माधव नेपालसँगको सल्लाहमा मुख्यमन्त्री बन्न जानु भएको होः युवराज ज्ञवाली
४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य माधवकुमार नेपालसँगको सरसल्लाहमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न गएको खुलासा भएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले हिमालयन टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘समय सन्दर्भ’सँगको अन्तवार्तामा यो कुराको खुलासा गरेका हुन् ।
अन्तरवार्तामा ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘अष्टलक्ष्मी शाक्यले बारम्बार केपी ओली, माधव नेपाल र हामी सित पनि मलाई मुख्यमन्त्री चाहिँदैन भन्नु भएको थियो । उहाँले आफूले मागेर होइन कमरेड माधव कुमार नेपालसँग बकाइदा छलफल गर्दा माधव कमरेडले तपाईँ जानुहोस् भनेर गएको हो ।’
ज्ञवालीका अनुसार यस सन्दर्भमा अष्टलक्ष्मीले भोली पार्टी के हुन्छ ? भोली तपाईँ हामी कता हुन्छौं ? भनी माधव नेपालसँग प्रश्न गर्दा माधव कमरेडले कर गरेर मुख्यमन्त्री बन्न भन्नु भएको हो । अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘अष्टलक्ष्मी शाक्य सँधैभरी पार्टी एकताको पक्षमा हो । माधव नेपाललाई कठिनतम समयमा पनि साथ दिएकै हो तर विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने हामी सबैको धारणा हो ।’
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बदल्नु पर्ने परिस्थिती आएपछि ओलीदेखि सबैको अनुरोधमा अष्टलक्ष्मी मुख्यमन्त्री बनेको ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘उहाँ मुख्यमन्त्री पाउनका लागि केपी ओली तिर गएको होइन, त्यो झुट कुरा हो । त्यो उहाँका विषयमा फैलाइएको अफवाह मात्र हो । अष्टजीका इमान्दारिता माथि प्रश्नचिन्ह उठाउने भनेको त्यो अपराध हो ।’